Abu Bakr al-Baghdadi ọnwụ - aghọ BỤ njọ ugbu a? | Apg29
Abu Bakr al-Baghdadi ọnwụ - aghọ BỤ njọ ugbu a?
Oké ụjọ onye ndú nke Ọ e gburu na a US wakporo. Al-Baghdadi bụ a PhD na islam n'akụkọ ihe mere eme triggered ya igbu onwe vest, na-egbu onwe ya na atọ nke ya na ụmụ ya.
The Muslim terrorörelsen A mgbe ụfọdụ e aro iso nke na-agụghị akwụkwọ buu mmanu mgbe na-ezo aka Islam na Koran maka ha arụrụala. Ma na Ọ ndú Abu Bakr al-Baghdadi nwere a PhD na islam n'akụkọ ihe mere eme na Baghdad University. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ihe Koran na Islam na-akụzi - ma ọ bụghị onye na-adịghị na-eme ya.
American wakporo n'abalị
Eight US helicopters ama n'otu ntabi anya gafee Turkish ókè-ala n'ime Syria na wakpoo a lekwasịrị n'ime obodo Barisha na Idlib ise kilomita site na ókè-ala.
BỤ onye ndú Abu Bakr al-Baghdadi na itoolu ndị ọzọ ndị mmadụ na e gburu na wakporo. Al-Baghdadi nwụrụ mgbe ọ triggered ya igbu onwe vest.
US President Donald opi ka nkwenye na Abu Bakr al-Baghdadi e gburu a wakporo. The-eyi ọha egwu onye ndú e chụpụrụ n'ime a ọwara ebe ọ adaha onwe ya na atọ nke ya na ụmụ ya ọnwụ . Mgbe ya abụọ nwunye ka e gburu na wakporo.
The president kwuru okwu pịa ogbako banyere niile ndị ndidi metụtara nke Ọ igbu mmadụ aghara aghara. Ọ kpọlitere ndị ọzọ, ndị American odeakụkọ James Foley e gbupụrụ ya isi na film na a Jordanian pilot onye ọkụ ná ndụ na a onu.
Oké ụjọ Ịwa ọbara rampage
Ọ bụ al-Baghdadi dị ka okpomọkụ nke 2014 kwusara islam State Caliphate na Siria na Iraq, na-eyi ọha egwu ije ọbara rampage na nke ha we, ihe ndị ọzọ Raqqah na Siria na Iraq nke abụọ kasị ukwuu obodo Mosul.
Ọtụtụ puku yazidier gburu Sinjar na 7000 agbọghọ na ndị inyom na-e dị ka mmekọahụ ndị ohu. Ọtụtụ ndị Kraịst nakwa na e gburu site A igbupụ isi ha na-eji mma. E nwere video nke a.
Na May 2019 atụle-eyi ọha egwu ije na meriri mgbe Kurdish-ada SDF agha kụrụ aka BỤ na ha ikpeazụ wusiri ike - al-Baghuz. SDF ọchịagha Mazlum Kobani mara ọkwa na ha meriri BỤ.
Ụwa kasị dị ize ndụ nwoke
Abu Bakr al-Baghdadi e weere dị ka ụwa kasị dị ize ndụ mmadụ, ma ugbu a, ọ bụ ihe nwụrụ anwụ. Ọ na mbụ kwuru na ya e gburu agha, ma ugbu a na US president Donald opi gosiri na ọ bụ ihe nwụrụ anwụ.
The Muslim terrorörelsen nwere mgbe ụfọdụ na-ekwu na-agụghị akwụkwọ Muslim buu mmanu mgbe na-ezo aka Islam na Koran maka ha arụrụala. Ma na Ọ ndú Abu Bakr al-Baghdadi bụ N'ezie-agụghị akwụkwọ. O nwere a PhD na islam n'akụkọ ihe mere eme na Baghdad University. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ihe Koran na Islam na-akụzi - ma ọ bụghị onye na-adịghị na-eme ya.
Ọzọkwa, ọ na mgbe ụfọdụ a na-atụ aro na ndị bụ ndị na-ahụ maka ndị a arụrụala ndị Alakụba. Ma ha soro Koran na Islam si akụkụ Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ ozi.
Aghọọ BỤ njọ ugbu a?
Mgbe Ọ KWESỊRỊ-ndú ọnwụ kwere iyi ọha egwu na-eme nchọpụta Magnus Ranstorp nke-eyi ọha egwu ije ga- re-iputa dị ka ihe "BỤ 3.0" . Ọ KWESỊRỊ na e meriri ma nwere ike dị iche iche-eyi ọha egwu na mkpụrụ ndụ ịnọgide na, bụghị dịghị ihe ọzọ Europe. The ije ga-aka njọ ugbu a na Europe? The echiche nke a caliphate ka ihe ọ bụla ikpe e kụriri.
Ndị mmadụ mkpa Jesus
Ndị mmadụ taa mkpa karịa mgbe, Jesus Christ. Alakụba, ndị Juu na ndị Jentaịl kwesịrị Jesus. Ọ bụ naanị na ọ na ọ dịghị onye ọzọ ndị nwere ike ịzọpụta. Ọ dịghị Muslim arụrụala rụrụ site ice nwere ike ịzọpụta. abughi na ha ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ya mere, ha na ndị mmadụ ọzọ na-anabata Jizọs. Site okwukwe na Jizọs ga-azọpụta site na amara nke Chineke n'ihi na Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị na bilie ọzọ n'ụbọchị nke atọ.
"Chineke hụrụ ụwa n'anya nke O nyere Ya na Ọkpara ọ mụrụ [Jesus], ka onye ọ bula nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi." - 3:16
"Ma dị ọtụtụ dị ka natara Ya [Jizọs], ha ka O nyere ike ighọ umu Chineke, ha na kweere na aha ya." - John 1:12
"Nke ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Jizọs bụ Onyenwe na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta." - Rome 10: 9
Chọrọ zọpụta ma na-niile gị gbaghaara mmehie? Kpee ekpere ekpere a:
- Jesus, m na-enweta ugbu a na-ekwupụta na ị na dị ka Onyenwe anyị. M kweere na Chineke akpọlite ​​gị nwụrụ anwụ. Daalụ m ugbu a na-azọpụta. Ekele gị na ị na-agbaghara m na-ekele gị na m ugbu a nwa Chineke. Amen.
Ndi ị na-enweta Jesus ke ekpere n'elu?